Talata 28B (Lk 11,37-41) 16/10/2018 | FKMP
Talata 28B (Lk 11,37-41) 16/10/2018
« Raha mbola niteny izy, dia nisy Farisiana anankiray nanasa azy hisakafo ao aminy, ka niditra izy dia nipetraka nihinana. Fa velona eritreritra ilay Farisiana nahita ity izy tsy nisasa alohan’ny fihinana,
ka hoy ny Tompo taminy: Hianareo Farisiana kosa iky mandio ny vohon’ny kapoaka sy ny lovia, kanefa ao anatinareo feno halatra sy faharatsiana.
Ry adala, moa izay manao ny vohony tsy nanao ny atiny koa? Izao ihany e: manaova fiantrana araka izay anananareo, dia hadio ho anareo ny zavatra rehetra. »
Ny endrintsika aty ivelany, ny hadiovan’ny ankanjo, ny maha-metimety ny paozintsika no matetika mibahana ao an-tsaintsika. Ny hadiovan’ny fo no tena zava-dehibe hoy Jesoa. Ka tokony hita taratra amin’ny asa ataontsika izany. Tsy amin’ny fitsikerana ny zavatra mety sy tsy mety ataon’ny hafa no afahantsika maneho izany, fa amin’ny fanaovana soa sy fanampiana ireo ory sy sahirana.
Tompo ô, diovy izahay, ataovy mitsiry ao am-ponay ny voan’ny hatsaram-panahy sy ny fitiavana.
Previous Post: Alatsinainy 28B (Lk 11,29-32) 15/10/2018
Next Post: Alarobia 28B (Lk 11, 42-46) 17/10/2018